Huawei P9, fahatsapana voalohany | Androidsis
Huawei P9, fahatsapana voalohany: fahombiazana tanteraka ny fifanarahana tamin'i Leica
Alfonso ny voankazo | | Huawei, About us
Ora vitsy lasa izay dia nandefa ny fahatsapako aho taorian'ny fitsapana ny Huawei P9 Plus, maodely feno indrindra an'ny mpikambana vaovao ao amin'ny fianakavian'i P an'ny mpanamboatra aziatika. Ankehitriny dia anjaran'ny Huawei P9.
Ary izao dia te hampiseho aminao ny ahy aho fahatsapana voalohany amin'ny Huawei P9, fitaovana iray izay efa nodinihiko ary mahatonga ahy ho talanjona amin'ny heriny, ny kalitaony ary, indrindra, ny mety ho fakan-tsary.
1 Ny kalitao dia vita amin'ny famolavolana minimalista izay manaraka aorian'ireo teo alohany
2 Toetra mampiavaka ny Huawei P9
3 Efijery 1080p, mihoatra ny ampy ho an'ny Huawei P9
4 Fakantsary Huawei P9
4.1 Ohatra amin'ny sary nalaina tamin'ny Huawei P9
5 Batterie misy fizakan-tena amin'ny haavon'ny Huawei P9
Ny kalitao dia vita amin'ny famolavolana minimalista izay manaraka aorian'ireo teo alohany
Ny tsipika Huawei's P dia miavaka amin'ny famaranana kalitao ary ny Huawei P9 dia tsy ho afa-miavaka. Amin'izany fomba izany, ny telefaona vaovao dia manana vatana unibody miaraka a Famaranana metaly vita amin'ny metaly any aoriana ho an'ny fijery premium indrindra.
Ataovy ao an-tsaina fa, ho fanampin'ity modely ity, Huawei dia nanamafy izany Ny Huawei P9 dia ho hita miaraka amina famaranana borosy ary na dia amin'ny fotsy fotsy aza. Richard Yu, CEO an'ny Huawei, dia nanamarika nandritra ny famelabelarana fa ny marika dia niasa fatratra mba hamorona smartphone miaraka amin'ny famaranana tsara sy ny antsipirian'ny kalitao. Azonao atao ny milaza fa i Huawei dia nikarakara ny antsipiriany farany amin'ny finday avo lenta.
Mifindra eo alohan'ny Huawei P9, ny telefaona dia misy fiarovana Corning Gorilla Glass 4 izay hisorohana ny finday amin'ny rangotra na hamaky ny efijery noho ny fidinana ratsy. Tsara homarihina fa, na eo aza ny fisian'ilay aloha manana sosona miaro ary ny ao aoriany manana chassis metaly, ny sisin'ny Huawei P9 dia boribory mamela ny telefaona hahazo aina, miaraka amin'ny fahatsapana lehibe ny mikasika.
Tsy toy ny zokiny lahy, ny Huawei P9 dia manana Efijery 5.2 inch. Asongadino ny habeny bitika, 145 x 70.9 x 6.95 mm izay mahatonga ny Huawei P9 ho iray amin'ireo terminal matevina indrindra eny an-tsena. Ankoatr'izay, ny lanjany 144 grama dia mahatonga ny P9 ho faran'izay maivana.
Ny ankamaroan'ny fahamendrehana amin'ny habeny kely dia mitoetra amin'ny sisiny kely farafahakeliny an'ny Huawei P9, mitazona ny efijery efa ho 73% amin'ny lafiny iray manontolo, fahombiazana lehibe. Ao amin'ny tapany ambony eo anoloana dia misy ny fakantsary, sensor sensor ary microphone an'ny telefaona, raha eo amin'ny faritra ambany kosa dia ahitantsika ny sary famantarana ny marika. Mahamenatra izany aza ampidirina ho mpikabary roa tahaka ny zokiny lahy.
Andao hiroso any aoriana. Amin'ny faritra ambony dia ny fakantsary roa miaraka amin'ny optika Leica. Ny faritra fakantsary iray manontolo dia rakotra Corning Gorilla Glass ary misosa miaraka amin'ny tontonana aoriana rehetra, noho izany dia tsy misy soritr'io hump mahasosotra izay ananan'ny ankamaroan'ny telefaona io.
Eo koa no nametrahan'ny Huawei ny sensor ho an'ny rantsantanana. Izaho manokana dia tena tiako ny zava-misy amin'ilay mpamaky biometrika, na dia misy aza ny olona maniry azy ho eo anoloana ny telefaona. Ho an'ny tsiro, ny loko.
Nifindra teo amin'ny ilany ankavanan'ny Huawei P9, ny ekipa mpamorona dia nampiditra ny fanalahidin'ny fanaraha-maso ny volume, ho fanampin'ny bokotra on sy off an'ny terminal. Andininy iray tena tiako dia izany ny bokotra herinaratra dia manana toetra mampiavaka azy izay mamela anao hanavaka azy mora foana amin'ireo lakile hafa. Huawei dia nikarakara ny antsipiriany rehetra. Ho fanampin'izany, mafy ny bokotra ary tena tsara ilay fahatsapana rehefa manindry azy ireo.
Amin'ny lafiny ambony madio tanteraka dia hanohy hiresaka ny lafiny ankavia isika. Io no nanambanan'ireo bandy Huawei ny slot ho an'ny karatra Nano SIM ary ny microSD. Farany dia manana ny ilany ambany isika izay misy ny mpampitohy USB Type C ary ny vokatra jack 3.5 mm hampifandray finday, ankoatran'ny mpandahateny Huawei P9.
Tsy tiako mihitsy ny toe-javatra misy ny mpandahateny. Mpanamboatra maro no miloka amin'ny fametrahana azy amin'ny farany ambany ary toa hadisoako izany satria afaka manarona ny vokatra audio ianao rehefa milalao lalao video. Ny Huawei P9 dia tsy ankanavaka. Mazava ho azy, tsy maintsy miaiky izany aho ny kalitaon'ny mpandahateny no nahagaga ahy. Tsy maintsy hizaha azy tsara kokoa isika, fa amin'izao dia tena tsara izany.
Mazava be ny fehin-kevitro momba izany: Huawei dia nanao asa tena tsara amin'ny famolavolana, manolotra telefaona misy kalitao misy famaranana amin'ny haavo avo lenta izay mikendry ny hijoro amin'i Apple sy Samsung.
Toetra mampiavaka ny Huawei P9
efijery IPS 5'2 "miaraka amin'ny teknolojia 2.5D sy ny vahaolana 1920 x 1080 HD mahatratra 423 dpi miaraka amin'ny fiarovana Corning Gorilla Glass 4
processeur HiSilicon Kirin 955 (efatra 72 GHz Cortex-A2.5 cores ary efatra 53 GHz Cortex-A1.8 cores)
ram 3 GB na 4 GB karazana LPDDR4 miankina amin'ny maodely
Tahiry anatiny 32 na 64 GB azo hatsaraina amin'ny alàlan'ny MicroSD hatramin'ny 128 GB arakaraka ny maodely
Fakan-tsary aoriana 12 MPX miaraka amin'ny rafitra fakan-tsary dual Leica / autofocus / detection face / panorama / HDR / Dual LED flash / Geolocation / 1080p fandraisam-peo amin'ny 30fps
Conectividad DualSIM Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / dual band / Wi-Fi Direct / hotspot / Bluetooth 4.0 / FM radio / A-GPS / GLONASS / BDS / GSM 850/900/1800/1900; Tarika 3G (HSDPA 850/900/1900/2100 - VIE-L09 VIE-L29) Tarika 4G (tarika 1 (2100) 2 (1900) 3 (1800) 4 (1700/2100) 5 (850) 6 (900) 7 (2600) 8 (900) 12 (700) 17 (700) 18 (800) 19 (800) 20 (800) 26 (850) 28 (700) 38 (2600) 39 (1900) 40 (2300) 41 (2500 ) - VIE-L09)
lafiny X X 145 70.9 6.95 MG
vidiny 599 na 649 euro miankina amin'ny maodely
Rehefa afaka roa andro fitsapana ny Huawei P9 dia afaka milaza izany aho miasa toy ny landy ny telefaona. Misy lojika raha dinihina fa ao AnTuTu ny Huawei P9 dia saika mahatratra teboka 100.000. Ary ilay maodely dinihiko dia ny 3 GB RAM. Asa lehibe hananganana ilay processeur mahery Kirin 955.
Izaho manokana dia tsy dia tiako loatra ilay sosona EMUI, na dia tokony hiaiky izany aza aho Android 6.0 Nanafaka bug izy ireo, toy ny rafitra multitasking mahatsiravina sy tsy mandeha amin'ny laoniny izay mifototra amin'ny carousel izay ahafahantsika mivezivezy amin'ireo fampiharana samihafa amin'ny fomba milamina kokoa. Miasa tsara ny telefaona, nanandrana lalao maromaro aho ary tsy nanana olana. Amin'izao fotoana izao, Ny Huawei P9 dia toa tsara eo amin'ny sehatry ny teknika.
Efijery 1080p, mihoatra ny ampy ho an'ny Huawei P9
Izaho dia mpiaro mafy ny efijery 2K, raha mikasa ny hampiasa rafitra virtoaly virtoaly ianao, raha tsy izany dia toa tsy dia ilaina loatra amin'ny telefaona izy ireo satria tsy dia hainao loatra ny mahasamihafa azy. Toa tsy dia liana loatra amin'ny famoronana solomaso VR azy i Huawei ka manohy miloka amin'ny efijery 1080p ary ohatra ny Huawei P9. Amin'izany fomba izany, ny telefaona vaovao an'ny mpanamboatra aziatika dia manana efijery noforonin'i a 5.2-inch IPS tontonana izay manome fampisehoana tena tsara.
Manome loko mazava be ny telefaona ankoatry ny fananana a zoro fijerena tsara izay ahafahanao mijery ny efijery tsy misy olana amin'ny tontolo misy anao, tsy maninona izany raha masoandro ny andro, raha izany dia tsy hamela anao ny Huawei P9.
Marihina fa ilay rindrambaiko mampifangaro ny Huawei P9 hamela anao hanova ny mari-pana loko ny lamba. Nefa mitandrema, tsy afaka mifidy mari-pana mafana na mangatsiaka kokoa fotsiny isika, fa afaka mifidy ny maripanan'ny loko amin'ny alàlan'ny refy chromatique. Andininy izay hankasitrahan'ny mpampiasa madio indrindra.
Fakantsary Huawei P9
Efa nahita telefaona hafa toa ny ZTE Axon Elite na ny HTC One M8 izay mampiditra rafitra fakantsary roa izahay. Saingy nanararaotra azy tamin'ny fomba hafa i Huawei. Ary ny vokatra dia tsy ho tsara kokoa.
Ho an'izany, ny mpanamboatra dia niara-niasa tamin'i Leica tamin'ny fampidirana ny fakantsary roa an'ny Huawei P9 dLeica Summarit H 1: 2.2 / 27 solomaso ASHP. Mety nahatsikaritra ianao fa somary voafetra ny vavahady f / 2.2, bebe kokoa raha ampitahaintsika amin'ny f / 1.7 natolotry ny Samsung Galaxy S7. Tsy misy zavatra lavitra amin'ny zava-misy.
Ary ilay fakan-tsary roa an'ny Huawei P9 dia manana sensor Sony IMX286 roa, ny voalohany dia tsy misy sivana Bayer, izay mitondra loko ny sary. Miaraka amin'ity rafitra ity, ny sensor an'ny monochrome Tsy maka sary mainty sy fotsy fotsiny izy mba hahafahany maka antsipiriany bebe kokoa noho ny sensor-loko.
Satria ity sensor monochrome ity dia tsy miraharaha afa-tsy ny hakana hazavana nefa tsy jerena ny lokony, avo kokoa noho izany ny zava-bitany. Raha ny filazan'i Huawei dia mamela izany ny sensor misambotra hazavana 270% bebe kokoa noho ny fakantsary Samsung Galaxy S7 na iPhone 6s, ankoatry ny miasa haingana be kokoa noho ny mpifaninana aminy.
Ho fanampin'ny fahazavana bebe kokoa, ny fakantsary roa miaraka amin'ny sensor Leica izay mampiditra ny Huawei P9 dia mamela antsika makà sary mifantoka voafantina amin'ny fotoana tena izy. Mazava ho azy fa tsy sary tena izy, fa simulation natao noho ny rindrambaiko fakan-tsary mahery an'ny Huawei P9. Efa nanao fitsapana maro aho ary tena tsara ny valim-panazavana.
Ny iray amin'ireo tanjaky ny fakan-tsary Huawei P9 dia miaraka amin'ny maody fampiasa azy. Ary io dia hahafahanao manova maramara isan-karazany, toy ny ISO na ny hafainganan'ny shutter, ahafahanao maka sary saika matihanina.
Tsy azonay adino ny safidin-tsivana an-jatony, ankoatry ny maody HDR fanta-daza, hatsaran-tarehy, monochrome, tifitra alina, fihetsehana miadana ... Ary ambonin'izany dia azonao atao ny mamonjy ny sary amin'ny endrika RAW!
Aza matahotra fa azonao atao ny mametraka ny fakan-tsary amin'ny maody mandeha ho azy mba haka sary haingana sy mora, na dia ilaina aza ny mandinika kely ny mety ho fakan-tsary Huawei P9, satria hahagaga anao izy ireo.
Ohatra amin'ny sary nalaina tamin'ny Huawei P9
Batterie misy fizakan-tena amin'ny haavon'ny Huawei P9
Ny Huawei P9 dia manana Connector USB Type C Ka hanana fifandraisana azo havaozina sy fahafaha-manao fifandraisana peripheral vaovao isika. Ary ny bateria 3.000 mAh dia nahavita tsara tokoa.
Raha raisina ny feo nomeko an-tariby tamin'ny alàlan'ny fanatanterahana fitsapana samihafa, ary raha tsy misy ny fandalinana feno kokoa dia efa antenaiko fa hanana ny Huawei P9 fahaleovan-tena eo anelanelan'ny iray andro sy sasany na roa andro arakaraka ny fampiasantsika ny telefaona.
Asongadino ny rafitra famahana haingana an'ny Huawei P9, izay mampiakatra ny antsasaky ny batterin'ny telefaoninao ao anatin'ny 30 minitra. Efa nanandrana aho ary efa. Tsy maintsy ampiantsika amin'izany fa ny bateria 3.000 mAh dia hofenoina ao anatin'ny adiny roa latsaka noho ny charger finday, izay tsy multivoltage, fa 2A
Mbola betsaka ny fizarana ao amin'ny Huawei P9 hamakafaka, fa amin'izao fotoana izao ny fahatsapana dia tsy tokony ho tsara kokoa; telefaona tena feno, miaraka amina endrika mahafinaritra sy fakan-tsary faran'izay tsara izay apetraka ho iray amin'ireo tsy ampoizina lehibe amin'ity taona 2016 ity.
Ireo modely roa ireo dia antenaina fa hiakatra amin'ny tsena amin'ny 16 aprily. Ny Huawei P9 miaraka amin'ny RAM 3 GB sy tahiry anatiny 32 GB dia handany vola 599 euros, raha hiakatra kosa ilay kinova misy RAM 4 GB sy fitehirizana 64 GB 649 euros.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Huawei P9, fahatsapana voalohany: fahombiazana tanteraka ny fifanarahana tamin'i Leica
Eto misy zava-dehibe tsy ampy amin'ny fampitahana amin'ny S7, sary amin'ny alina; Na dia tsara dia tsara aza ireo sary aseho amin'ny antoandro ary amin'ny ankabeazany dia mifanohitra amin'ny jiro na toa izany
Huawei dia nanambara ny MediaPad T2 10.0 Pro miaraka amin'ny fampisehoana WUXGA sy Snapdragon 616
Huawei P9 Plus, fiheverana voalohany: Huawei dia miatrika ny Samsung Galaxy S7